GADZIRISA YAKAIPA KANGANISO HAPANA MUTAURO FAIRA RAKAWANIKWA - NYORO
Gadzirisa Yakaipa Kanganiso Hapana Mutauro Faira Rakawanikwa
Gadzirisa Yakaipa Kanganiso Hapana Mutauro Faira Rakawanikwa: Paunotanga Windows asi pachinzvimbo chekupinda mukati skrini wakatarisana neFatal Error: Hapana Mutauro Mutauro Wakawanikwa ipapo pamwe nekuda kwechirongwa chekutanga icho chakashatiswa. Muzviitiko zvakawanda chirongwa chekutanga ichi SpyHunter application, kana iwe uchangobva kuisa kana kusunungura chirongwa ichi zvino chinokonzeresa iko pamusoro kukanganisa.
Asi hazvidi kuti chirongwa chimwe chete chakonzeresa kukanganisa paPC yako sezvo mushandisi yega yega dhizaini yakasiyana saka unofanirwa kutanga wagadzirisa nyaya yacho. Saka pasina kutambisa chero nguva ngatione kuti Ungagadzirise Zvakadii Kanganiso Hapana Mutauro Faira Rakawanikwa nerubatsiro rwepazasi-rwakanyorwa gadziriso yekugadzirisa.
Maitiro 1: Bvisa SpyHunter
Maitiro 2: Ita Yakachena Boot
Maitiro 3: Mhanya SFC uye DISM
Maitiro 4: Mhanya CCleaner uye Malwarebytes
Maitiro 5: Ita Sisitimu Kudzorera
Ita shuwa ku gadzira yekudzorera poindi , kungoitika kana chimwe chinhu chikatadza kufamba.
1.Type Kudzora muWindows Search wobva wadzvanya pa Kudzora Panel.
google mepu haigone kushanda
2.Dzvanya Zvirongwa wobva wadzvanya pa Zvirongwa uye Zvimiro.
3. Tsvaga SpyHunter wobva wadzvanya kurudyi kwariri uye sarudza Uninstall.
4.Wait for Windows kuti uninstall application wozotangazve PC yako.
Dzimwe nguva 3rd party software inogona kunetsana neWindows uye inogona kukonzera nyaya. Kuti uzo Gadzirisa Yakaipa Kanganiso Hapana Mutauro Faira Rakawanikwa , unofanirwa ita bhutsu yakachena pane yako PC uye woongorora iyo nhanho nhanho.
1.Dzvanya Windows Key + X wobva wadzvanya pa Raira Kukurumidza (Admin).
2.Zvino nyora zvinotevera mu cmd uye rova ​​pinda:
Sfc /scannow sfc /scannow /offbootdir=c: /offwindir=c:windows (If above fails then try this one)
3. Mirira kuti pamusoro maitiro apedze uye kana wapedza wotangidza PC yako.
4.Dzazve yakavhurwa cmd uye nyora unotevera kuraira uye rova ​​pinda mushure meumwe neumwe:
a) Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth b) Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth c) Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
5.Rega iyo DISM yekuraira mhanya uye umirire kuti ipedze.
6. Kana iwo wekuraira pamusoro usingashande saka edza pazasi:
Dism /Image:C:offline /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:	estmountwindows Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:	estmountwindows /LimitAccess
Ongorora: Tsiva iyo C: RepairSourceWindows nenzvimbo yekugadzirisa kwako (Windows Kuisirwa kana Kudzoreredza Disc).
7.Dzorera PC yako kuti uchengetedze shanduko uye uone kana uchikwanisa Gadzirisa Kukanganisa Kwakaipa Hakuna Mutauro Faira Rakawanikwa muWindows 10.
1 Dhawunirodha uye gadza CCleaner & Malwarebytes.
2. Mhanya Malwarebytes uye rega itarise system yako kumafaira anokuvadza.
3.Kana malware ikawanikwa inozoabvisa otomatiki.
4. Zvino mhanya CCleaner uye muchikamu cheChenesa, pasi peWindows tab, tinokurudzira kutarisa sarudzo dzinotevera kuti dzicheneswe:
5.Kana iwe waita imwe chaiyo mapoinzi akaongororwa, ingori tinya Mhanyai Kuchenesa, uye rega CCleaner imhanye nzira yayo.
6.Kuchenesa yako system zvakare sarudza iyo Registry tebhu uye uone kuti zvinotevera zvinotariswa:
Sarudza Scan kuti ubudise uye bvumira CCleaner kuongorora, wobva wadzvanya Gadzirisa Yakasarudzwa Nyaya.
8.Kana CCleaner achibvunza Iwe unoda backup backup kune iyo registry? sarudza Hungu.
9.Kana backup yako yapera, sarudza Gadzirisa Zvese Zvakasarudzwa Nyaya.
10.Tangazve PC yako kuchengetedza shanduko uye uone kana uchikwanisa Gadzirisa Yakaipa Kanganiso Hapana Mutauro Faira Rakawanikwa.
1.Press Windows Key + R uye nyora sysdm.cpl ipapo rova ​​pinda.
2. Sarudza Dziviriro yeSystem tab uye sarudza Sisitimu Dzosera.
3.Dzvanya Inotevera uye sarudza chaunoda Sisitimu Dzorera poindi .
chrome hapana mahwindo mawindo 10
4.Tevera iyo pa - screen kuraira kupedzisa system kudzoreredza.
5.After reboot, iwe unogona kugona Gadzirisa Yakaipa Kanganiso Hapana Mutauro Faira Rakawanikwa.
Ndikwo iwe wakabudirira Gadzirisa Yakaipa Kanganiso Hapana Mutauro Faira Rakawanikwa asi kana uchiri nemibvunzo ine chekuita nenyaya iyi unzwe wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
Nzira yekugadzirisa uTorrent Access yakaramba
Gadzirisa uTorrent Kuwana Kwakarambidzwa Kanganiso: Mhanya uTorrent semutungamiriri, chinja mvumo marongero eDownload faira, Dzorerazve uTorrent
Kugadziriswa: Ichi chishandiso hachigone kutanga. (kodhi 10) network adapta, realtek yakakwira tsananguro odhiyo kana usb kune serial
Ichi chishandiso hachigone kutanga. (Kodhi yegumi) kukanganisa kunowanzoitika kana maneja wedhizaini asingakwanise kutanga chishandiso chehardware senge purinta, ruzha kana USB chishandiso. Heano mamwe mhinduro iwe aunogona kuisa kugadzirisa iyo nyaya
6 Nzira dzekushandura Mushandisi mukati Windows 10
Windows 10 Gadziridza yakanamatira kurodha pasi zvinyorwa? Edza izvi zvinonyungudika
Maitiro Ekuita DDoS Kurwisa pane Webhusaiti uchishandisa CMD
Rongedza WiFi icon yakachekerwa mukati Windows 10
Ungachinja Sei Zvirongwa Zvirimo muWindows 10
Maitiro Ekumisazve Network Zvirongwa (KuDefault setup) Mu Windows 10 20H2 kugadzirisa
Maitiro ekugadzirisa Auto-Rotate Kwete Kushanda pane Android
Nzira yekushandura & Kumanikidza 4K Vhidhiyo kune MP4 paWindow 10
Maitiro Ekudzima Incognito Mode muGoogle Chrome?
Maitiro Ekudzoreredza mafaera kubva kune akarasika + akawanikwa
windows 10 kutanga kwese kwese pasina yambiro
zvinorevei kana purinda iri mune yekukanganisa mamiriro
usb kunyora kunodzivirirwa windows 10
yakakosha kukanganisa kutanga menyu haisi kushanda windows 10
kuhwina 10 nhema skrini ine cursor
kukanganisa kusingazivikanwe kwakaitika panguva yekudzorera 0x80070003